इयूको युक्रेनसँग ऐतिहासिक सम्झौता - BBC News नेपाली
Image caption युक्रेनसँग युरोपेली युनियनले यो सम्झौता गरेपछि त्यसको झट्का मस्कोलाई पुगेको छ
यूरोपेली यूनियन इयुले शुक्रबार यूक्रेन जोर्जिया तथा मोल्दोभासंग एशोसिएसन एग्रिमेन्ट भनिने आबद्धताको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।
ती देशहरुलाई इयूप्रति नजिक्याउने ठानिएको उक्त समझदारीप्रति रुसले कडा विरोध जनाएको छ।
यूक्रेनका राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्कोले सहमतिलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिएका छन्।
यो समझदारी गर्नका निम्ति यूक्रेनले ठूलो मूल्य चुकाएको उनले यूरोपेली नेताहरु समक्ष बताए।
सोही समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरेपछि पूर्व राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो।
यानुकोभिच हटेपछि रुससंग चर्किएको द्वन्दकामाझ क्राइमिया यूक्रेनबाट टुक्रिएर रुसमा गाभिन पुगेको थियो।
यूरोपेली युनियनले यूक्रेनसहित पूर्व सोभियत संघका तीन गणराज्यहरुसंग शु्क्रबार एक दूरगामी व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।
उक्त सम्झौताको ‍औपचारिक नाम एशोसिएन एग्रिमेन्ट एन्ड डिप एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ फ्रि ट्रेड एरिया हो।
यसले ती देशहरुमा पनि इयू मापदण्डको भन्सार नियम, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धा लागु हुन्छ।
आर्थिक रुपमा यी पूर्वी यूरोपेली देशहरु इयूसंग पहिले नै जोडिएका अन्य देशहरुभन्दा पछि परेका थिए।
आर्थिक एकिकरणलाई भविष्यमा यिनको इयूको सदस्यता तर्फ दह्रो पाइलाको रुपमा हेरिएको छ।
यो कस्तो महत्वपूर्ण दिन रह्यो। शायद यूक्रेनको स्वतन्त्रतापछिको यो नै सबभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो। एउटा यस्तो अवसर जुन ऐतिहासिक तथा भविष्यमुखी दुवै छ। यसले कसरी विषयहरु छोटो समयमा नाटकीय ढंगले परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने देखाउँछ।
पेट्रो पोरोसेन्को, राष्ट्रपति, युक्रेन
शुक्रबारको सम्झौतालाई आफ्नो देशको इतिहासको एक महत्वपूर्ण क्षणको रुपमा यूक्रेनका राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्कोले व्याख्या गरेका छन्।
उनले भने, "यो कस्तो महत्वपूर्ण दिन रह्यो। शायद यूक्रेनको स्वतन्त्रतापछिको यो नै सबभन्दा महत्वपूर्ण दिन हो। एउटा यस्तो अवसर जुन ऐतिहासिक तथा भविष्यमुखी दुवै छ। यसले कसरी विषयहरु छोटो समयमा नाटकीय ढंगले परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने देखाउँछ।"
ब्रसेल्समा सम्झौता हस्ताक्षरका निम्ति भेला भएका इयूका नेताहरुलाई राष्ट्रपति पोरोशेन्कोले आफ्नो राष्ट्रले चुकाएको मूल्य उल्लेख गरे।
उनीभन्दा अघिका यूक्रेनी राष्ट्रपतिले रुससंग नजिकिन खोज्दै सो सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि महिनौंसम्म आन्दोलन भएको थियो।
ती आन्दोलनले सत्तापलट गरेपछि रुसले क्राइमियालाई आफुमा गाभिदियो।
अहिलेपनि पूर्वी यूक्रेनमा हिंसा जारी छ।
हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै यूरोपेली परिषदका अध्यक्ष हर्मन भान रोम्पोयले भने, "यो कुनै साधारण सम्झौता होइन। यो त हाम्रा आपसी सम्बन्धको इतिहासमा र समग्र यूरोपकै निम्ति कोशेढुंगा हो। कियभमा र अन्यत्र यूरोपेली युनियनसंग निकटताका निम्ति मानिसहरुले आफ्नो ज्यान दिएका छन्। हामीले कदाचित त्यसलाई बिर्सन हुन्न।"
शुक्रबारको सम्झौताप्रति रुसी नेताहरुले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
मस्कोस्थित बीबीसी सम्वाददाता स्टिभ रोजेनबर्ग भन्छन्, "सम्झौतालाई लिएर त्यहाँ एक किसिमको झोंक चलेको छ कि कसरी मस्कोले ती देशलाई त्यस्तो सम्झौता नगर्नाका निम्ति मनाउन सकेन भनेर।"
सम्झौतालाई लिएर त्यहाँ एक किसिमको झोंक चलेको छ कि कसरी मस्कोले ती देशलाई त्यस्तो सम्झौता नगर्नाका निम्ति मनाउन सकेन भनेर।
स्टिभ रोजेनबर्ग, बीबीसी संवाददाता
यो सम्झौताप्रति रुसको आर्थिक चासो छ।
उसलाई डर छ कि कतै अब रुसी बजारमा सस्ता यूरोपेली सामान ओइरिने पो हुन् कि? र कतै त्यसले रुसी उत्पादकहरुलाई नोक्सान पुर्याउने पो हो कि?
त्योभन्दापनि गम्भीर चासो चाहिँ भूराजनीतिकै रहेको छ।
पूर्व सोभियत संघका राज्यहरु जसलाई मस्कोले आफ्नै प्रभावक्षेत्रभित्र रहेको ठान्ने गर्छ तिनीहरु यूरोपेली युनियनतर्फ ढल्किन थालेको उसलाई पटक्क मन परेको छैन।
खासगरी यूक्रेनको सन्दर्भमा मस्को यो विषयलाई लिएर निकै चिन्तित पाइन्छ।
हस्ताक्षर हुनु ठिक अघि बीबीसीसंग कुरा गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका आर्थिक सल्लाहकार सेर्गेई ग्लाज्येभले सम्झौतालाई अवैध भन्दै यूक्रेनी सरकारलाई नाजीको संज्ञा दिए।
उनले भने, "हस्ताक्षरपछि यूरोपेली जनता आश्चर्यमा पर्ने छन्। किनकी यूरोपेली कर्मचारीहरु र केही यूरोपेली नेताहरुका कारण जन्मन पुगेको यो यूक्रेनी नाजी सत्ताले तिनका ढोका ढक्ढक्याउनेछन्। लाग्छ यूरोप अब नाजीका साथ बस्न रुचाउँदैछ।"
आउँदा दिनमा खासगरी पूर्वी यूक्रेनमा स्थिति कस्तो हुने हो भन्ने धेरै चिन्ता बढेको छ।
केही दिन अघि यूक्रेनी राष्ट्रपति पोरोशेन्को तथा सशस्त्र पृथकतावादी विद्रोहीहरुले घोषणा गरेको युद्धविरामको अवधि शुक्रबार नै सकिंदैछ।
शुक्रबारको सम्झौताले यूक्रेनलाई राजनैतिक तथा आर्थिक सुधारको एक महत्वाकांक्षी मार्गमा डोर्याउने ठानिएको छ।
कियभस्थित बीबीसी सम्वाददाता डेभिड स्टर्न भन्छन्, "यूरोपसंग आर्थिक रुपले जोडिनु त छँदैछ यस घटनाले महिनौंदेखि त्यहाँ जारी राजनीतिक तनावलाई एउटा उत्कर्षमा पुर्याइदिएको छ।"